२ अर्ब डलर भ्रष्टाचार अाराेपमा पन्जाब बैंकका १८ कर्मचारी निलम्बन - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
२ अर्ब डलर भ्रष्टाचार अाराेपमा पन्जाब बैंकका १८ कर्मचारी निलम्बन
फागुन ०७, २०७४ 1281
भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिबिआई) ले झन्डै २ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा सरकारी स्वामित्वको एक बैंकका १८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । फर्जी तथा गैरकानुनी कारोबार गरेको आरोपमा निलम्बन गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा केही कर्मचारीलाई रंगेहात समातिएको जनाइएको छ । सिबिआईका अनुसार पन्जाब नेशनल बैंकका कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन् । पन्जाब बैंकले नेपालमा एभरेष्ट बैंकसँग सहकार्य गरी कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पन्जाब बैंकले भनेको छ– अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीले फर्जी तथा गैरकानुनी कारोबार गरेको भेटियो । उनीहरूले १ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक हिनामिना गरेको देखियो । सिबिआईले इन्टरपोलसँग सम्पर्क गर्दा अर्बपति हीरा व्यापारी निरब मोदी र उनको परिवार विरुद्धको सूचना पाएको थियो ।
सिबिआईले निरब, उनकी श्रीमती अमी मोदी, भाइ निशल मोदी र व्यावसायिक साझेदार मेहुल चुक्सी विरुद्धको सूचना पाएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा बैंकका कर्मचारीले गैरकानुनी कारोबार गरेको भेटिएको जनाइएको छ ।
इन्टरपोलको सूचना कम औपचारिक भए पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न वा कारोबारस्थल पत्ता लगाउन धेरै सहयोगी हुने सिबिआईका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले बताए । प्रवर्तन निर्देशनालयले विदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि निरब र उनका सहयोगीको राहधानी तथा यात्रा कागजातसमेत रद्द गरेको छ ।
गैरकानुनी बैंकिङ कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएपछि सिबिआईले निरब, उनका सहयोगी र गिताञ्जली गहना पसलले विदेश कारोबार गरेको तथ्य खोजिरहेको छ ।